FOKO: Tonga ny BOMBS (Ny bilaogy Malagasy tsara indrindra) · Global Voices teny Malagasy
FOKO: Tonga ny BOMBS (Ny bilaogy Malagasy tsara indrindra)
Voadika ny 08 Jona 2019 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, polski, English
Mba hanokafana varavarankely midadasika kokoa ho an'ny tontolon'ny bilaogy malagasy, nanomboka ny fifaninanana bilaogy tamin'ny taona 2007, antsoina hoe Bilaogy Malagasy Tsara Indrindra – Best Of Malagasy Blogs (BOMBS) ny FOKO Madagascar. Ny vaovao tsara dia efa niverina ny taona 2009 ny BOMBS. Ireo mpandresy tamin'ny taona 2007 no nanao mpitsara tamin'ity indray mitoraka ity. Joan Razafimaharo mampahafantatra fa:
Hifarana ny 31 Desambra ny fanendrena bilaogy amin'ny fifaninanana bilaogy tsara indrindra BOMBS ary hambara amin'ny 3 febroary izay mpandresy aorian'ny fandinihan'ny mpitsara ny lisitr'ireo tafiditra famaranana.
Hisy sokajy 6 izany, anisan'izany ny famantarana ara-kolontsaina eto Madagasikara, ny zavatra Malagasy arovana, ny bilaogy amin'ny teny malagasy sns, izay ahafahana manendry ny bilaogy.
Nanasa ireo bilaogera Malagasy mba hikarajia hiresaka momba ny loka ny FOKO .
Nanamarika i Tahina fa tsy dia nahasarika firy tao Madagasikara ny Fihaonambe momba ny Fiovan'ny toetrandro tao Copenhague noho ny krizy ara-politika misy (jereo ny lahatsoratr'i Andrydago raha hijery ny antsipiriany). Saingy araka ny tatitra nataon'ny haino aman-jery ao an-toerana, manahy momba ity olana ity ny tanora Malagasy. Ary miharihary kokoa izany noho ny zava-nitranga taorian'izay. Nikarakara valan-dresaka an-DAHATSARY tao Toamasina ny JADE Madagasikara sy ny FOKO Madagasikara mba hiresaka momba ny zava-mitranga ao amin'ny valan-dresaka COP 15 ao Copenhagen.
Manoratra momba ny fihaonambe i Patrick:
Andro iray niavaka tao an-drenivohitr'i Betsimisaraka ny Sabotsy farany teo. Nifanerasera mivantana tamin'i Copenhagen Danemark tamin'ny alalan'ny “video-conference” i Toamasina. Mahavariana! ny Teknolojia! Tsy hitanao ve? Ary izany dia noho ireo mpikatroka ao amin'ny FOKO Blog Club Tamatave sy JADE Madagasikara izay miezaka mafy hatrany ary mahita fomba tsara hiarovana ity planeta ity eo afovoan'ny fandrahonan'ny fiovan'ny toetrandro ity.
Tany am-piandohan'ny fihaonambe dia toa tahaka ny mahazatra ny zavatra rehetra. Afaka mijery sy mihaino tsara ny adihevitra Cop15 izahay. Tampoka teo dia nalahelo izahay satria dimy (minitra) monja talohan'ny fandraisanay anjara mivantana tamin'ity adihevitra ity, dia tapaka ny jiro ka nampihitsoka ny rehetra ary izany no antony nahatonga ny fotoana iray tsy nahitana ahy tao amin'ny aterineto. Soa ihany fa efa niomana tsara izahay, ary nahatakatra tsara ny toe-javatra nisy anay ihany koa ireo mpandray anjara tamin'ny Cop15. Saingy na izany aza, tsy naharitra ela izany. Minitra vitsy taorian'izay dia nisosa tsara toy ny teo aloha ny zava-drehetra. Nahomby izany satria afaka nandray anjara tamin'ny fihaonambe tamin'ny fotoana tena nisy izahay. Nahavita ny iraka tamim-pifaliana tanteraka izahay.
Ariniania miresaka momba ny Fozaorana, karazana patsabe izay miaina anaty dobo sy tanimbary:
Nanjary nalaza tao anatin'izay roa taona lasa izay ny Fozaorana. Lasa fiteny iray izay ampiasain'ny Malagasy amin'ny fiainany andavanandro izany. Ny dikany lehibe dia mifanaraka amin'ireto teny ireto: marobe, malaza, mora.
- Antsoina hoe Fozaorana ny tovovavy maolamaola
- Antsoina hoe Fozaorana ny finday mora vidy
Nitantara zavatra mampalahelo izy fa niharan'ny halatra sy haro-paosy.
Diana mitanisa ireo zavatra izay ataonao rehefa any Madagasikara. Imahaka namoaka toro-hevitra mikasika ny fomba ahafahana mitady sakaiza tsara amin'ny fiainana ary nahoana no tsy maintsy misafidy iray ny olona.
Pakysse namoaka lahatsary mampiseho ny korontana tanteraka amin'ny fifamoivoizana any Antananarivo, fa na dia ny fiara mpitondra marary aza tsy afaka mandeha:
Satria efa akaiky ny fety Krismasy, mirary ny rehetra hanao Krismasy Sambatra i Lova Rakotomalala (Enga anie hilamina ny ny Krismasinao). Nizara karazana fialantsasatra malaza vitsivitsy amin'ny fomba malagasy izy:
Mirary Krismasy sambatra sy fialantsasatra mahafinaritra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana Rising Voices.